Iidola zoLutsha zaBafikisayo- Thenga ulutsha oluMdaka ngeNtombazana eyiNtombazana- iiUrdolls
Ixabiso eliphantsi lokwabelana ngesondo kwabasetyhini
Ukuthenga oonodoli abakwishumi elivisayo kwivenkile ye-Urdolls kwi-intanethi kuya kukwenza ukhumbuze ngeentsuku ezimnandi zobutsha. Sivuse iinkumbulo zakho zobutsha ngendlela yoonodoli abakwishumi elivisayo, kwaye vumela iihomoni zakho ziqhubeke ne-orgasm. Sisebenzisa ulusu lwe-silicone ye-polymer ye-PE kunye nesakhelo samathambo esishukuma ngokupheleleyo ukwenza unodoli wesondo oselula ophantsi yamaphupha akho ngokusekelwe kumgaqo okufutshane nolusu lokwenene.
Ngaba ujonge unodoli wesondo oselula?
I-Urdolls yivenkile yoonodoli bezesondo obuchwephesha kwi-Intanethi, sibonelela ngoonodoli bokwenyani ngokwenyani ngobukhulu obahlukeneyo, isiphelo esiphezulu ulutsha olwenziwe ngoonodoli ngesondo kunye nomgangatho ophezulu we-tpe oonodoli bezesondo njengabasetyhini bokwenene, ukubamba kunye namava ngesondo kuyinyaniso ngakumbi, ukuba ufuna i unodoli wesini okwishumi elivisayo,unodoli wokwenene Okwishumi elivisayo ahlangabezana ngokugqibeleleyo neemfuno zakho. ulutsha oluthandana ngesondo ngokubanzi ngonodoli abancinci bezesondo abakwishumi elivisayo, njengobukhulu babo obuncinci kunye nobunzima obulula, kwaye benza kube lula kuwe ukuba uye kwindawo yesondo oyifunayo. Yiyo loo nto unodoli wokwabelana ngesondo okwishumi elivisayo ethandwa kakhulu, kulula ukubaqokelela.
Yintoni kanye kanye unodoli wesondo okwishumi elivisayo?
Oonodoli abakwishumi elivisayo unodoli wesondo oselula othandekayo idalwe ukwenza iminqweno yakho yesini iphile. Ukusebenzisa imathiriyeli efana ne-TPE yokwenyani, baneempawu zobuso ezingenakuthelekiswa nanto kunye nemimandla eyonelisayo ene-rogenous. Oonodoli besondo abakwishumi elivisayo banokukuzisela ubuqabane kunye nokwaneliseka, mhlawumbi nokunceda isithukuthezi, ixhala kunye nokudakumba.
Thenga unodoli wesondo okwi-Intanethi oselula
Obo buso bugqibeleleyo, ulutsha olukwishumi elivisayo kunye nomzimba oqinileyo, omanzi emlonyeni. Kukho isizathu esivakalayo Ukwabelana ngesondo nodoli wolutsha zithandwa kakhulu. Balinde nje ukuba ubabonise iindlela zegumbi lokulala kwaye ulungelelanise iminqweno yakho enzulu. Nokuba uyazithanda izinto ezibhityileyo okanye ezincinci okanye ufuna ukwanelisa iingcinga zakho zobutsha, sinabo bonke oonodoli abakwishumi elivisayo ukuba bakuphambane. Kodwa abayi kukuhlekisa nje— Oonodoli baseJapan zilungele isenzo!